Iyo iPhone 7 ichauya neEarPods uye Mheni adapter | IPhone nhau
Isu tatozvitaura: iyo iPhone inowanzo kuverengerwa munaGunyana uye iri muzhizha panoburitswa rumwe ruzivo, rwumwe rwacho muchimiro chemakuhwa. Iyo iPhone 7 ichasvika iine shanduko huru dzinoverengeka, asi inonyanya kupokana kusavapo kwe3.5mm headphone port. Chinhu chakanaka ndechekuti isu tinogona kunakidzwa nemadhijitari odhiyo, semuenzaniso, asi chakaipa ndechekuti isu tingazoda mahedhifoni kana Nzeve specials kana adapta. Asi iwe ungatofanira kutenga rakasiyana Mheni adapter?
Apple inoita purofiti yakawanda kubva mukutengesa zvishongedzo zvemidziyo yayo uye isu tese takafunga (ini ndichiri kufunga) kuti, kana pakupedzisira iyo iPhone 7 ikasvika isina 3.5mm headphone port, iyo inotevera iPhone yaizosvika ine Lightning EarPods uye, kana isu taida shandisa mamwe mahedhifoni, isu tinofanirwa kutenga Mheni kune jack adapter. Zvino, Mac Otakara, uyo akatoburitsa ruzivo rwakavimbika munguva yakapfuura, anovimbisa kuti iyo iPhone 7 inosvika neyakajairwa EarPods uye adapta kuitira kuti tikwanise kuramba tichishandisa mahedhifoni edu.
EarPods uye Mheni-Jack adapter ye iPhone 7
Mac Otakara akadzidza nezve mukana uyu mu Computex Taipei 2016 uye, parizvino, isu tinofanirwa kutora ruzivo seguhwa, kunyanya kana tichifunga kuti vanhu veCupertino havadi kutumira mabhokisi ane zvinhu zvakawanda mukati, izvo zvinopa fungidziro yekuti vanosarudza mufananidzo kune sarudzo.
KuComputex Taipei 2016, vagadziri vazhinji vakaratidza maadapter emagetsi matsva eMheni, uye zvinoita sekunge runyerekupe rwakatenderera kuti mahedhifoni ayo aizoverengerwa muiyo iPhone 7 nyowani icharamba iri yavo jackphone senguva dzose, uye kuti Mheni adapter inosanganisirwa mupakeji.
Sezvatakambotaura, ruzivo rwese rwungori runyerekupe kusvikira rwasimbiswa, asi zvirokwazvo runyerekupe urwu runofarirwa nevashandisi vazhinji: kune rumwe rutivi, tinogona kuramba tichishandisa mahedhifoni atinayo. Kune rimwe divi, isu taigona kutenga Mheni mahedhifoni uye kunakidzwa nani kurira. Kunyangwe, kuti zvese zvive zvakakwana, ndinofunga zvingave zvakanaka kana iyo iPhone 7 ikauya nayo USB-C, chiyero chichava nesu kwenguva refu kupfuura chinobatanidza Mheni. Chero zvazvingaitika, zvishoma hachizi chinhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Runyerekupe rutsva runovimbisa kuti iyo iPhone 7 inosvika neEarPods uye yeMheni adapter
Chinhu chimwe chete icho chiri kuitika neMacbook chichaitika, iwe unogona chete kuita chinhu chimwe chete panguva imwe chete, mune iyi nyaya uchafanirwa kusarudza pakati pekuteerera kumumhanzi kana kuchaja nharembozha yako, Apple iri kuita zvakanaka kwazvo, inoenderera kurasikirwa nevatengi nekuda kwekuda kwako kugadzira iyo yakanyanya smartphone. tetepa zvisinei nekubaira bhatiri, skrini, 3.5mm jack, nezvimwe nezvimwewo
Chikumbiro chebasa raApple pakati pevechidiki tarenda chinodzikira